ESI ARỤNYE VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Netwọk mmekọrịta netwọk VKontakte na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi mmekọrịta nke mmekọrịta nke usoro usoro usoro nke onye ọrụ yana usoro nhazi usoro. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịda mbà na ntọala mpaghara nke onye ọrụ ahụ, n'ihi ihe saịtị VK.com anaghị arụ ọrụ dịka o kwesiri.
N'ihi na eziokwu na saịtị nke a na-elekọta mmadụ. netwọk enweghị ike ịhazi ọnọdụ gị n'ụzọ ziri ezi, arụ ọrụ ndabara na-arụ ọrụ na-akpaghị aka, ya bụ, VKontakte na-egosipụta nanị na Russian. Ọ ka nwere ike idozi nke a n'ihi na nlekọta ahụ enyela maka ntọala n'ime ụlọ na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere iji họrọ asụsụ ogbi kachasị mma.
Otu esi agbanwe asụsụ nke VKontakte
Ruo ugbu a, enwere otu ụzọ ịhọrọ asụsụ maka isi mmekọrịta mmadụ. Netwọk VK na-ejikọta na atụmatụ njirimara. N'okwu a, ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ọtụtụ asụsụ nke ụwa na ụfọdụ ndị na-adịghị arụ ọrụ dị mkpa karịsịa.
Mgbe ị sụgharịrị peeji VK gị site na ntọala, dịka ọmụmaatụ, gaa na Bekee, naanị ihe ndị dị na interface ahụ ga-egosipụta nke ọma. Ya mere, a ga-azọpụta ozi niile, ederede ederede na ọtụtụ ndị ọzọ na mbido mbụ ya.
Gaa na saịtị ahụ VKontakte ma mepee menu isi site na ịpị avatar gị n'akụkụ aka nri nke ibe.
Site na ndepụta nke ngalaba nyere, họrọ "Ntọala".
Na igodo nsoroụzọ n'akụkụ aka nri nke windo ịgbanwee gaa na ngalaba ahụ "General".
Pịgharịa gaa na ibe a na ala ma chọta ihe ntọala. "Asụsụ".
N'akụkụ aka nri nke aha asụsụ ị na-arụ ugbu a, pịa aka nri na ntinye aka "Gbanwee".
Iji rụọ ọrụ mmezi nke asụsụ isi, ị nwekwara ike pịa mpaghara ọ bụla n'ime ihe ahụ "Asụsụ".
Na windo nke meghere, a ga-enye gị ndị isi na asụsụ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịwụnye nsụgharị ọ bụla ọzọ karịa ndị e gosipụtara na windo oghe, pịa njikọ ahụ "Asụsụ ndị ọzọ"iji gosipụta asụsụ niile dịnụ.
N'ịbụ ndị kpebiri na ịhọrọ nsụgharị dị mkpa maka interface VKontakte, mee ka LMB pịa otu aha ya.
Mgbe niile omume gị, netwọk mmekọrịta ga-asụgharị ya na asụsụ a họọrọ.
N'agbanyeghị nsụgharị ị họọrọ, ọrụ kachasị nke netwọk mmekọrịta agaghị agbanwe. Nanị otu bụ aha gị, nke, maka ọtụtụ akụkụ, ga-asụgharị n'asụsụ dị iche na Russian.
Mgbe ị na-etinye otu asụsụ ma ọ bụ asụsụ ọzọ, na ngbanwe nke ntụgharị nke oge ọzọ, na windo imeghe mmalite "Nhọrọ asụsụ" eji mee ihe na nso nso a.
Ọ bụrụ na iji aka gị họrọ asụsụ na ibe gị, ị nwere ike ịgbanwe ya na onye ọzọ naanị site na parameters. Nke ahụ bụ, n'ihi omume nke ntuziaka ahụ a chọrọ, ụkpụrụ mpaghara agaghị emetụta profaịlụ gị, a ga-etinyekwa nsụgharị dị mkpa na weebụsaịtị VK.
A na-atụ aro ka ị jiri naanị asụsụ ndị ị maara n'ezie, n'ihi na ọ bụrụ na e nwere ihe isi ike n'akụkụ na nsụgharị ọzọ nke interface nke netwọk mmekọrịta a. Anyị na-achọ ka ị nwee obi ụtọ na-agbanwe asụsụ VKontakte.